नेपाल आज | तीनै तहका सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छः मुख्यमन्त्री राउत [अन्तर्वार्ता]
मुुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । सङ्घीय प्रणालीको एक प्रमुख हिस्सेदार प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकारले संविधानद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारहरू निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाएको छ कि छैन ? उसका सामु के कस्ता चुनौती छन् ? केन्द्रसँग उसका अपेक्षा के के छन् ? यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग लिईएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था, असमान व्यवहार, एकल जातीय चिन्तनले सञ्चालन भइरहेको शासन व्यवस्था विरूद्ध भएका मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन र विद्रोहको निष्कर्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनमा आएको हो । संविधानले सङ्घीयता र गणतन्त्रका भावभूमिमा जनताको गन्तव्यलाई स्पष्ट पारेको छ । सङ्घीयतालाई जनताको दैलोसम्म पु¥याउन सङ्घीयतालाई अङ्गीकार गरेका विश्वका अन्य राष्ट्रले झैं प्रारम्भमा सामना गर्नुपरेको जटिलताबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । परिस्थितिजन्य अवस्थालाई सामना गरी शासन व्यवस्थालाई सही गोरेटोमा ल्याउन आवश्यक छ । हाल सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको शासकीय संरचनाको अन्योल मनोदशा नै मूल समस्याको रूपमा देखिएको छ । परिणामस्वरुप संविधानमा उल्लिखित अधिकारलाई सहज रूपमा जनताले उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । चुनौतीको सामना गर्दै यथार्थमा मुलुकको समृद्धि र विकास सङ्घीय परिवेशमा नै हुने शासकीय स्वरूप निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।
संविधानमा तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी तोकिएको छ तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । कोरोना महामारीले भयाक्रान्त अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन निर्माण र प्रभावितलाई पु¥याएका सेवा सङ्घीय प्रणालीकै दृष्टान्त हो । सङ्घीय संरचना भएकै कारण विद्यमान समस्याको सामना गर्नमा दुबै तहका सरकारबीच सहमति र सहकार्यको सबल व्यावहारिक स्थिति छ । तथापि केन्द्रीय सरकारमा सङ्घीय प्रणालीप्रति इमान्दार स्वीकोरोक्ति स्पष्ट रूपमा देखिनु जरुरी छ ।
संविधानमा अधिकार उपयोगका सम्बन्धमा अनुसूची नै लेखिएको छ तर, व्यावहारिक पक्ष कमजोर छ । अनुसूचीमा लेखिएबमोजिमको ऐन, कानून निर्माणको कार्यप्रति सङ्घ संवेदनशील हुनुपर्दछ । ऐन, कानून निर्माणप्रतिको उदासीनताले प्रदेशका काम प्रभावित भएका छन् । अझै सङ्घीय संरचना अनुसारको स्वरूप दिन सकिएको छैन । सङ्घद्वारा बनाइएको अधिकाँश ऐन, कानूनमा प्रदेशलाई सङ्कुचन गरिएको छ । बजेट वितरणदेखि कानून निर्माणसम्ममा उदारता देखिनु पर्छ । सङ्घीय निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशको लोकसेवाले गति लिन सकेको छैन । यो दुःखको कुरा हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले परिकल्पना गरेझैें सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन । अधिकार सिंहदरबारभित्रै राखिएको छ । बजेट नदिने, सङ्घीयता विरोधीहरूलाई सल्लाहकार बनाउने, एकात्मक केन्द्रीकृत सोच पाल्ने कामले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने अभियान नारामा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारू, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत वर्गप्रति भेदभाव अद्यापि कायमै छ । समावेशी र समानुपातिक नीतिलाई उपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा न्यायोचित अधिकार उपयोग गरिएको छैन । आमाका नाममा नागरिकता दिने सवाललाई गौण बनाइएको छ । संविधान संशोधनका मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको छ । अतः केन्द्रले भेदभाव, अधिकार कटौतीको अन्त्य, समान सहभागिता अनुरूपको अधिकार प्रत्यायोजन र संविधानको अक्षरशः पालन गरी सङ्घीयतालाई दिगो बनाउने वातावरण निर्माणमा प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ ।
मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, अपाङता भएका, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा गरिएका ऐन, कानून मैत्रीपूर्ण छैनन् । समानुपातिक र समावेशी नीतिप्रति मौखिक प्रतिबद्धता मात्र गरिँदै आइएको छ । दोहन, शोषण गर्ने, आफूखुशी गर्ने संस्कृतिबाट मुक्त भएको अवस्था छैन । उत्पीडित वर्गप्रति न्याय भयो भने संविधानप्रति अपनत्व बोध हुन सक्छ तर, केन्द्रीय सरकारले यी वर्गसामु आश्वासन मात्रै दिइरहेको छ । सरकारद्वारा नियुक्ति दिँदा यी वर्गसँग गरिएका विभेदको परिदृश्य संविधानको मर्मसंग मेल खाँदैनन् ।
सबैको साझा लक्ष्य ‘समृद्धि’लाई केन्द्र सरकारको घेराभित्र मात्र राखिनु हुन्न । साझा लक्ष्यलाई एकल बनाइनु हुन्न भन्ने लाग्छ । साझा लक्ष्य हासिल गर्न साझा सोच, विचार र प्रक्रिया अङ्गीकार गर्नुपर्दछ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाई हरेक वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । हामी एकल दृष्टिकोण नथोपरियोस् भन्ने चाहन्छौं । समयमै नीति बन्न नसक्दा जनअपेक्षाको कार्य सम्पादनदेखि साझा अधिकार अन्तर्गत पर्ने संयन्त्रबीच अन्योलको स्थिति छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनता र खासगरी प्रदेशवासीलाई के आग्रह गर्न चाहनु हुन्छ?